गहिरो प्रेममा रहेका अक्षय र शिल्पाको सम्बन्ध यस कारणले गर्दा बिग्रिएको थियो ? :: Times of Pradesh
गहिरो प्रेममा रहेका अक्षय र शिल्पाको सम्बन्ध यस कारणले गर्दा बिग्रिएको थियो ?
२०७८ कार्तीक ९ गते , मंगलवार Times Of Pradesh
एजेन्सी । बलिउड खेलाडी अक्षय कुमारले बलिउडलाई धेरै सुपरहिट फिल्महरु दिएका छन्। बलिउडको साथसाथै उनी आफ्नो व्यक्तिगत जीवनका कारण पनि सुर्खेतमा रहन्छन्। एकै साथ, उनको दिनहरुमा पनि, उनी आफ्नो अ’फे’यर को कारण धेरै चर्चा मा छन्। एकै साथ, विवाह पछि, अक्षय को नाम प्रियंका र कैटरीना कैफ संग जोडिएको थियो।
जस्तै अक्षय धेरै सुपर हिट फिल्महरु को एक हिस्सा भएको छ, उनले धेरै अभिनेत्रीहरु संग आफ्नो प्रेम बनाएका छन्। आउनुहोस्, आज हामी अक्षय संग शिल्पा शेट्टी को अफेयर को बारे मा जान्नेछौं। भनिन्छ कि उनीहरुको जवानी को समय मा, अक्षय र शिल्पा को अफेयर को बारे मा धेरै चर्चा मा आए। दुबै आफ्नो सम्बन्ध को बारे मा धेरै गम्भीर थिए। दुबैको इन्गेजमेन्ट समेत भइसकेको थियो र दुबै जना बिहे गर्न पनि लागेका थिए। तर यो भनिन्छ कि अन्त मा, अक्षय बेवफाई गरे र नतीजा यो भयो कि विवाह उनीहरु दुबै को लागी टुट्यो र शिल्पा यस बाट नराम्रोसँग टुट्यो।
यस पछि चाँडै, अक्षय ट्विंकल को नजिक भयो र चाँडै ती दुबै धेरै नजिक आए। यस्तो अवस्थामा शिल्पा र अक्षयको सम्बन्ध पनि पूरै टुट्यो। अक्षय र शिल्पाले धेरै फिल्ममा सँगै काम गरेका छन्। भनिन्छ कि दुबै फिल्म मै खिलाडी तू अनारी को समयमा एक अर्काको नजिक आए। उनीहरु दुबैको अफेयरको खबरले ठूलो आवाज संग राउन्ड गर्न थाल्यो। यस्तो अवस्थामा जब दुबैको ब्रेकअप भयो, चारैतिर त्रास थियो।
ब्रेकअप पछि शिल्पाले अक्षयमाथि धेरै गम्भीर आरोप लगाए। शिल्पाले भनिन्, “मलाई बिल्कुल थाहा थिएन कि अक्षयले मेरो साथमा यस्तो गर्ने, मलाई ट्विंकल संग कुनै गुनासो छैन किनकि यदि मेरो पार्टनरले मलाई धोका दिन्छ भने, म अरु कसैलाई के भन्नुरु” शिल्पाले अक्षयलाई ठट्टा गर्दै भनिन्, “अक्षयले मलाई दुई पटक प्रयोग गरे र मलाई धोका दिए, जब पनि उसले अरु कसैलाई भेट्टायो, उसले मलाई छोड्यो।
तर म भाग्यमानी छु कि मैले यो बाट बाहिर आउन को लागी शक्ति पाएँ। तर म अक्षयलाई यी सबैका लागि कहिल्यै माफ गर्दिनँ र त्यस पछि म उनीसँग फेरि कहिल्यै काम गर्ने छैन। ” रिपोर्टका अनुसार शिल्पा फिल्म ‘धडकन’को सुटिमा थिइन् जब उनलाई थाहा भयो कि अक्षयले उनीलाई धोका दिइएर ट्विंकलसँग डेट गरिरहेका थिए ।
शिल्पाले खुलासा गरेकी थिइन् कि फिल्म ठीक ढंगले पूरा हुनु पर्छ, यसैले उनले त्यसबेला केहि भनेनन् तर पछि अक्षय संग कहिल्यै काम नगर्ने कसम खाए। शिल्पा राज कुन्द्रा संग विवाहित छन् र अब उनी एक सुखी जीवन जीइरहेकी छिन्। उनका एक छोरा र एक छोरी छन्। उनीहरु हरेक चाडपर्वमा आफ्ना छोराछोरी र पतिको साथमा देखिएका छन्।
२०७८ कार्तीक ९ गते , मंगलवार